राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो भन्ने ! – Dailny NpNews
राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो भन्ने !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २७, २०७८ समय: २२:२८:३२
सिंह राशी उक्त राशी भएका पुरुषहरु पत्नीले भन्दा बढी माया गर्ने गर्छन् । तर यो राशी भएका पुरुषहरु अरु राशी भएका भन्दा जिद्दी र रिसालु स्वभावका हुन्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुको जोडी एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरुको घर व्यवहार सहज ढंगले चलाउन सक्छन् ।